Concrete Batching Plant, ihe igwekota, ihe ọganihu mgbapụta Truck - Conele Group
Concrete batching osisi
Anyịnya ihe batching osisi
Akọrọ ngwa agha Ịgwakọta osisi
Concrete nyefee ọganihu
Concrete ọganihu mgbapụta gwongworo
Concrete imegharị ihe maka iji igwe
3 mmepụta bases
Mmepụta isi dị na South China, Southwest China na North China.Convenient oké osimiri na okporo ígwè njem ana achi achi kacha uru.
15 iche iche na ngwá
Ekpuchi ihe Ịgwakọta pumping nyefee na imegharị ihe maka iji ngwá, ọzọ oke maka ị.
25 afọ 'ahụmahụ
Guzosie Ike na 1993, raara nye R & D, ahịa na mgbe-ahịa nke ihe akụrụngwa.
28 alaka ụlọ ọrụ
Dị iche iche enyemaka-elekwasị anya na R & D na mmepụta nke dị iche iche mmiri, n'ịhụ na àgwà nke ọ bụla akụrụngwa bụ na enterprise larịị ma nwere ike onwe ere na ọbọhọ na ahịa.
The ụlọ ọrụ Isonye na-azụlite ọkachamara talent na-agbakọ ogologo oge mmepe nke ụlọ ọrụ.
Ahaziri ọrụ na-egosi na anyị oru ike na ahịa acceptance.Almost ihe niile nwere ike ahaziri dị ka gị mkpa, na-ekpuchi n'ime akụkụ ika nhọrọ, mpụga mma, etc.OEM na ODM na-ọnọ.
Tupu na-ere anyị ga nwere ike ikwu na kwesịrị ekwesị na ngwá dị ka ahịa mkpa na ihe ndị ọzọ bara ọnọdụ iji ahụmahụ anyị na ọkachamara knowledge.After n'ire, anyị engineer-maka echichi debugging na ọzụzụ onwe onye online ma ọ bụ na saịtị.
Factory kpọmkwem price
Achọ agents.The gị n'ụlọnga usoro bụ a nnukwu atụmatụ nke ìgwè anyị dina dum world.we'll agbalị kasị mma anyị na-akwado ma na-echebe na-ebute ọdịmma nke agent.lower price, àgwà ahịa ego, free mgbasa ozi ngosi nkwalite wdg
Self rịa nyefee ọganihu
Ejima aro Concrete igwekota
JZC / JZR350 obere obere igwekota